कर्मचारीले सके भत्तामा ९ अर्ब, लुगामा ३ अर्ब !
३ वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारले कर्मचारीका लागि भत्ता र अन्य सुविधामा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । करिब ३८ प्रतिशतले कर्मचारीको तलब खर्च वृद्धि गरेको सरकारले अन्य सुविधामा पनि ३१ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा खर्च बढेको हो ।
सरकारी कर्मचारीहरुको भ्रमणमा मात्रै एक सय १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तीन शीर्षकमा प्रस्तुत गरिएको भ्रमण खर्च अन्तरगत विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्चमा भने पाचँ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । भ्रमण खर्च र अन्य भ्रमण खर्चमा क्रमशः एक सय २३ र एक सय ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वाषिर्क प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार कुल भ्रमण खर्च एक अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि भएर दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
भत्तामा ९ अर्ब खर्च
भत्ता शीर्षकमा मात्रै नौ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको हो । अन्य भत्ता र स्थलगत भ्रमण भत्तामा सरकारले क्रमशः चार अर्ब ६९ करोड र २१ करोड रुपैयाँ खर्चिएको हो ।
यी शीर्षकमा ५८ देखि ८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । महंगी भत्तामा सरकारले तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र कर्मचारीलाई स्थानीय क्षेत्रमा जाँदा दिइने भत्तामा एक अर्ब ३८ करोड खर्च गरेको छ ।
औषधोपचारमा ६ अर्ब २३ करोड
सेवामा रहेका र निवृत्त हुँदा कर्मचारीले सरकारबाट ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ औषधोपचारको रुपमा प्राप्त गरेका छन् । वहालवाला कर्मचारीले सरकारबाट ३५ करोड रुपैयाँ यस शीर्षकअन्तरगत बुझेका छन् भने निवृत्त हुँदा पाँच अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बुझोका हुन् ।
‘औषधोपचारमा गएको खर्च निजामति सेवाको वृत्तिविकास अन्तरगतकै खर्च हो । यो खर्च घटाउन सकिँदैन, बरु बढाउनुपर्छ,’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । सरकारले जस्तोसुकै स्वास्थ उपचारको जिम्मेवारी लिनुभन्दा निश्चित रकम तोकेरै दिइने यो व्यवस्था राम्रो भएको र अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।
२५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरुले सेवा अवधिमा पाउने औषधोपचार वापतको रकम पुरै नलिएको अवस्थामा निवृत्त हुँदा बाँकी रकम एकमुष्ट लिन पाउने व्यवस्था छ ।
पोशाक र खाद्यान्नमा १६ अर्ब ९२ करोड
सरकारले कर्मचारी र सेना प्रहरीलगायतको पोशाक तथा खाद्यान्नमा १६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले पोशाकमा ३ अर्ब १८ करोड र खाद्यान्नमा १३ अर्ब ७४ करोड खर्च गरेको छ ।
प्रहरी, कारागार लगायतमा समेत खाद्यान्न वापत खर्च हुने प्रवत्ता पोखरेलले उल्लेख गरे ।
गत आव ०७३/७४ मा १० खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले कर्मचारीको तलब लगायतका अन्य सुविधामा मात्रै एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको साढे ११ प्रतिशत हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मुनाफा रकम ५१ करोड अर्थात् १२.८३ प्रतिशतले वृद्धि गरी चार अर्ब ४५ करोड पु¥याएको छ । कोषले बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल आम्दानीमा तीन अर्ब २५ करोड अर्थात् १२.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएर २९ अर्ब ९६ करोड पुगेको हो । यसैगरी कोषको कुल वित्तीय स्रोतमा ३० अर्ब ३९ करोड अर्थात् ९.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएर तीन खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्म अर्थात् साउन, भदौ र असोज महिनामा कर्मचारी र उच्च-पदस्थ पदाधिकारीको तलब र भत्तामा ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खर्च भएको छ। त्यस्तै करार कर्मचारीको सेवा र परामर्श तथा शेवा शुल्कको लागिसमेत भुक्तानी रकमलाई हेर्दा ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्य...
३ वर्षपछि कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाण्डाै - सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को लागि सार्वजनिक भएको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलव २० प्रतिशतले बढेको छ । आउँदाे आर्थिक वर्षमा राजपत्र अनंकितकाे २० तथा अंकितकाे लागि १८ प्रतिशत तलब बढाइएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा सरकारले कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशत बढाएको थियो । ...
बजेटः कर्मचारीको तलब २० र १८ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले ७६ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजपत्रांकित (.अधिकृतदेखि माथिका) कर्मचारीका लागि १८ र राजपत्रअनंकित कर्मचारीका लागि २० प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेको छ ।&nbsp; आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ...
नेपाल आज बैशाख २०७६
कर्मचारीको अनुत्पादक खर्च कटौती, १५ अर्ब जोगिने
काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विभिन्न भत्ता, अनुगमन, भ्रमण, कार्यक्रमलगायत विभिन्न अनुत्पादक शीर्षकका बजेटमा कटौती गरेको छ । विभिन्न अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बचत हु
काठमाडौं : सरकारले कर्मचारीले पाउने महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै प्रकारका भत्ता कटौती गरेको छ। कर्मचारीका विविध भत्तामा मात्रै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि उपलब्धि नभएको ठहर गर्दै महँगी र स्थानीयबाहेक सबै भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।...
वर्षमा भत्ता र भ्रमणमा २२ अर्ब सक्छन् सरकारी कर्मचारी
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूले गत वर्ष मात्र तलबबाहेक २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरेका छन्। सेवा प्रवाहको सवालमा सधैं जनगुनासाको घेरामा पर्दै आइरहेका कर्मचारी अतिरिक्त सुविधाप्रति अझै ...
कर्मचारीको भत्ता र पोसाकमै सकिन्छ राज्यको ढुकुटी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सरकारले कर्मचारीका लागि भत्ता र अन्य सुविधामा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । करिब ३८ प्रतिशतले कर्मचारीको तलब खर्च वृद्धि गरेको सरकारले अन्य सुविधामा ...
चार हजार कर्मचारीले रोजे स्वेच्छिक अवकाश, आठ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान
१४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा झण्डै ४ हजार निजामती कर्मचारीले रुची देखाएका छन् । ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीका लागि ल्याइएको यस योजनामा आवेदन दिने अन्तिम दिन आइतबारसम्म तीन हजार सात सय ४८ जनाले निवेदन दिएका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । १७ प्रतिशतले …